Mitokona tsy mihinan-kanina ilay bilaogera Iraniana malaza Hossein Rongahi taorian’ny fakàn’ny manampahefana an-keriny azy · Global Voices teny Malagasy
Niala ny voa iray tamin'ny taovan'ity tanora mpikatroka ity nandritra ny fanagadrana azy teo aloha
Voadika ny 05 Marsa 2022 5:02 GMT
Nalaina an-keriny tao an-tranony tao Tehran tamin'ny 23 Febroary ilay bilaogera Iraniana malaza taorian'ny sioka manakiana ny volavolan-dalàna fiarovana ny aterineto mampiady hevitra. Pikantsary avy amin'ny lahatsary Youtube nivoaka tamin'ny 23 Febroary ilay sary, izay niseho niaraka tamin'ny reniny sy ny rainy.
Nanomboka nitokona tsy hihinan-kanina i Hossein Rongahi Maleki, bilaogera malaza, mpikatroka, ary gadra noho ny feon'ny fieritreretana tamin'ny Alarobia 23 Febroary ho fanoherana ny fisamborana azy, taorian'ny sioka navoakany mitsikera ny fanapahan-kevitry ny parlemanta Iraniana hametra bebe kokoa ny fidirana amin'ny aterineto.
Araka ny voalazan'ny Komity Mpiaro ny Mpanao Gazety (CPJ), nidiran'ny mpitandro ny filaminana tsy fantatra an-tsokosoko ny tranon'i Ronaghi Maleki ao Tehran, ary nitondra azy tany amin'ny toerana tsy fantatra izy ireo. “Tsy nanaiky tamin'ny fomba ofisialy ny manampahefana fa tompon'andraikitra tamin'ny fisamborana an'i Ronaghi Maleki, tsy nisy fiampangana nambara tamin'ny fomba ofisialy, ary tsy afaka nanamarina ny toerana nitazonana ilay bilaogera, ny antony nisamborana azy, na ny sampan'ny mpitandro ny filaminana nisambotra azy ny CPJ, ” hoy ny fikambanana tamin'ny fanambarana nivoaka tamin'ny 24 febroary.
Voalaza ho niteny ny rahalahin'i Hossein tamin'ny 27 Febroary fa nanomboka fitokonana tsy hihinan-kanina ilay bilaogera nogadraina raha vao voasambotra.
Niditra tao amin'ny Twitter ireo mpanohana sy mpikatroka mba hitaky ny famotsorana azy
Niseho ny bemidina tao an-tranon'i Maleki sy ny fakana an-keriny iray andro taorian'ny randran-tsioka navoakany tamin'ny Talata:
If you can't write the truth about the “Protection Plan” and internet censorship in Iran, do not bury the truth.
The Protection Plan was a decision made by the entire system based on the demand from Islamic Republic's leader who had stated: “Virtual space must be controlled.” https://t.co/Ytj07e3TMw
Raha tsy afaka manoratra ny marina momba ny “Drafitra Fiarovana” sy ny sivana amin'ny aterineto ao Iran ianao, dia aza alevina ny marina.
Fanapahan-kevitra noraisin'ny rafitra iray manontolo mifototra amin'ny fangatahan'ny mpitarika ny Repoblika Islamika ny Drafi-piarovana izay nilaza hoe: “Tsy maintsy fehezina ny sehatra virtoaly.”
Naneho ny ahiahiny momba ny toe-pahasalamany sy ny fiarovana an'i Hossein ny fikambanana Iran Human Rights any Norvezy, ary nilaza fa “nolavina tamin'ny mpisolovavan'i Hossein Ronaghi ihany koa ny firesahana amin'ny arovany na ny fahazoana ny antontan-taratasy mikasika ny raharahany hatramin'ny nanjavonany tamin'ny 23 Febroary. Voatazona ao amin'ny paroasy foibe ao amin'ny fonjan'i Evin i Hossein amin'izao fotoana izao.”
Niteraka resabe sy ahiahy maro momba ny fanitsakitsahana ny zon'ny tena manokana ny volavolan-dalàna momba ny fiarovana ny Aterineto ao Iran, izay eo am-pandinihina azy amin'izao fotoana izao ny ao amin'ny parlemanta. “Hanome fahefana ny manampahefana hifehy tanteraka ny aterineto” ny andininy faha-19 amin'ilay volavolan-dalàna, izay heverina ho lany na dia eo aza ny fanoherana ao amin'ny antenimieram-pirenena.
Nanameloka ny fisamborana an'i Hossein ny fampitam-baovao maro sy fikambanana mpiaro ny zon'olombelona tahaka ny Reporters Sans Frontières ary nandrisika ny famotsorana azy avy hatrany.
Araka ny filazan'ny rahalahiny, nahazo antso fandrahonana maromaro i Hossein tao anatin'ny herinandro vitsivitsy ary nilaza tamin'ny fianakaviany fa mety hosamborina indray izy tsy ho ela.
Manoto TV any Londra nanonona ny renin'i Hossein ho niteny hoe nolazain'ny mpanao famotorana iray izy fa “hovonoina ho faty ny zanany.”
Mpiaro ny fahalalahana maneho hevitra nandritra ny taona maro i Hossein Ronaghi. Efa nosamborina izy tamin'ny volana Desambra 2009, enim-bolana taorian'ny fifidianana filoham-pirenena nahabe adihevitra tao Iran. Nogadraina avy hatrany tao amin'ny fonjan'i Evin malaza ratsy izy, nigadra natoka-toerana nandritra ny 376 andro talohan'ny nanombohan'ny fitsarana azy ihany nony farany tamin'ny taona 2010. Niteraka sazy 15 taona an-tranomaizina izany noho ny fiampangana azy ho “nanaparitaka fampielezan-kevitra manohitra ny fitondrana,” “mpikambana ao amin'ny vondrona Internet Iran Proxy,” ary “fanevatevana ny mpitarika faratampony Iraniana sy ny filoha.” Niala ny voa iray tamin’ny taovany tamin'izy tany am-ponja.
Tamin'ny fanambarana nivoaka ny alakamisy, nitaky ny famotsorana tsy misy hatak'andro an'ilay bilaogera malaza ny CPJ, sy ny fanafoanana tsy misy hatak'andro ny fiampangana rehetra azy. “Manoloana ny fisamborana an'i Seyed Hossein Ronaghi Maleki, toa manohy hatrany ny fomba fanaony tsy mitombina amin'ny fanagadrana fahatany ireo mpanao gazety tsy misy fiampangana ny governemanta Iraniana,” hoy ny talen'ny Fandaharan'asan'ny CPJ Carlos Martinez de la Serna. “Tsy maintsy mamotsotra avy hatrany an'i Ronaghi Maleki ny manam-pahefana na farafaharatsiny manambara ny toerana misy azy sy izay fiampangana azy ary mamela ny Iraniana rehetra hiditra am-pahalalahana amin'ny aterineto,” hoy ny fanambarana.